Princess Cruises Australia: Mar dambe hoos ugama sii dhacayso sanadkan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Princess Cruises Australia: Mar dambe hoos ugama sii dhacayso sanadkan
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • saaciday inay • News • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Princess Cruises ayaa ku dhawaaqday in la kansalay fasaxyadeedii dalxiis ee Australia ilaa Disembar ee sanadkan. Tani waxay imaaneysaa kadib marki inbadan oo markab dalxiis ah horey loo qasbay.
Martida ku ballansan safar dalxiis oo la joojiyay, waxaa loo wareejin doonaa safar u dhigma sanadka 2022.
Ikhtiyaar kale oo martidu haysato ayaa ah inay qaataan amaah safar dalxiis oo mustaqbalka u dhiganta 100 boqolkiiba qiimaha safarka ee la bixiyay oo lagu daray gunno dheeraad ah oo aan la soo celin karin oo ah 10 boqolkiiba qiimaha.
Qof kasta oo boos celis sameeyay, waa inuu codsadaa lacag celin ama dhibco illaa Julaay 31, 2021.
Khadka markabku wuxuu sheegay in hubanti la'aanta sii socota ee la xiriirta waqtiga dib loo bilaabayo ciidaha dalxiiska ee gobolka, Princess waxay joojineysaa dalxiisyada ka baxa Australia gudaheeda iyo dibedda ilaa Diseembar 19, 2021.
Martida ku ballansan safar dalxiis oo la joojiyay, Princess waxay martida u rari doontaa safar u dhigma sanadka 2022. Khadka dalxiisku wuxuu sheegay in nidaamka dib u soo celinta ay ilaalin doonaan qiimaha martida ee 2021 ee safarkooda beddelka ah. Haddii kale, martidu waxay dooran karaan amaah dalxiis oo mustaqbalka ah (FCC) oo u dhiganta 100 boqolkiiba qiimaha safarka ee la bixiyay iyo lacag dheeri ah oo aan la soo celin karin oo loo yaqaan 'FCC' oo u dhiganta 10 boqolkiiba qiimaha safarka ee la bixiyay (ugu yaraan US $ 25) ama soo celinta buuxda ee asalka ah foomka bixinta.
Codsiyada waa in lagu helaa iyada oo loo marayo foomka onlaynka ah by Julaay 31, 2021 ama martida ayaa si otomaatig ah u heli doona ikhtiyaarka FCC. FCC-yada waxaa loo isticmaali karaa markab kasta oo dalxiis ah oo la xajisto lana raaco marka la gaaro Diseembar 31, 2022.
Doomaha doonyaha laga dalbo waxaa laga dalban karaa la-taliye xagga socdaalka ah, ama waca 1-800-PRINCESS
(1-800-774-6237), ama booqashada shabakadda shirkadda.
Princess ayaa ka ilaalin doonta guddiga wakiilada safarada duubista la bixiyay oo buuxa iyadoo la aqoonsan yahay doorka muhiimka ah ee ay ka ciyaaraan ganacsiga safarka iyo guusha.
Macluumaadka ugu badan iyo tilmaamaha loogu talagalay martida ballansan ee ay saameeyeen joojintan, iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan FCCs iyo soo celinta, waxaa laga heli karaa internetka Macluumaad ku saabsan Doomaha Doomaha Rakaaban.
Princess Cruises ayaa tan ku tiri boggeeda:
Sida wajiyo badan oo nolosha ah, safarka waxaa ku dhacay dhacdooyin dhowaan dhacay. Waa wadnaha culus ee Princess Cruises ay qaadatay go'aan aad u adag oo si ku-meelgaar ah loogu hakinayo howlaha markabkeenna caalamiga ah. Waan ognahay inaad sugeysay inaad nala raacdid badda, waxaanan kaa raaligalinaynaa oo aan la qaybsanaynaa niyad-jabkaaga ku saabsan joojintaas. Uma baahnid inaad wax tallaabo ah qaadatid si aad u hesho bixinta magdhowga caadiga ah. Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta magdhowgaaga adigoo gujinaya xiriiriye u dhigma taariikhda shiraacaaga hoose.
Dhawr toddobaad ka hor, Princess Cruises ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo Sebtember 25 iyo Noofambar 28, 2021, doonyaha dusha ka fuula sideed markab oo ah nooca loo yaqaan 'Princess Medallion Class' ayaa mar kale martida u qaadi doona Caribbean, Panama Canal, Mexico, Hawaii, iyo California Coast.
Liis dhameystiran oo safarkii Princess Cruise ee horay loo baajiyay, riix halkan.